गुठी हाम्रो धर्म हो, कसले मास्‍न सक्छ ? - नेपाल समय
गुठी हाम्रो धर्म हो, कसले मास्‍न सक्छ ?
सत्यमोहन जाेशी। तस्बिर : नेपाल समय
गुठी आजको शब्द हैन। संस्कृत भाषाको गोष्ठिका शब्द अपभ्रंश भएर गुठी शब्द बनेको हो। लेलेको सरस्वती कुण्ड मन्दिरमा राजा शिवदेव र अंशुवर्माको पालामा कोरिएको शिलालेखमा पानिय गोष्ठिका, बाधित्र गोष्ठिका शब्द रहेका छन्। त्यसमा मुलुकी ऐनजस्तै राज्यको सारा व्यवस्था उल्लेख छ।
हामीले स्कुल पढ्दा दरबार र पाटन हाइस्कुलका शिक्षक गुठीबाट तलब लिन्थे। वीर अस्पतालका डाक्टरलाई गुठीबाट तलब दिइन्थ्यो भने बिरामीले गुठीको पैसाबाटै दालभात खान्थे।
गुठी व्यवस्था धेरै राम्रो हो। तर यसलाई शासकले सम्हाल्न सकेनन्। नीति र परम्परा नबुझेर गुठी अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो। नयाँनयाँ आविष्कारले सबै पुराना नीति र कृति बिग्रँदै गए।
मच्छिन्द्रनाथको गुठी पनि छ। रथ तान्ने क्रममा बिग्रियो भने गुठीले आफ्नो स्रोत प्रयोग गरी सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छ। यसका लागि कुनै क्याबिनेटबाट पास गर्नु पर्दैन। यो सरकारको टाउको दुखाइको विषय भएन किनभने त्यहाँ गुठी छ। सबै व्यवस्था गुठीले नै गर्छ।
गुठी विधेयक ल्याएर सरकारले जनतालाई छल्न खोजेको छ। सरकारले पूरा गर्न नसकेको एउटा कामबाट जनतालाई अर्कोतिर भुलाउन खोजेको हो। जस्तै - मेलम्चीको पानी। बुद्धि भएको भए मेलम्चीको काम पूरा गर्नुपर्थ्यो। त्यसका लागि गुठीको मद्दतको आवश्यक छ भनेको भए सबै तयार हुन्थे।
राम्रो कामका लागि चन्दा दिन पनि पछि हट्दैन कोही। गुठी विधेयक ल्याउनु भनेकै सुतेको बाघलाई उठाउनुजस्तै भएको छ। गुठीका व्यक्तिले सरकारलाई केही भनेकै छैनन्। सरकारले राम्रै गर्न खोजेको होला। तर सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरुसँग सल्लाह नै नगरी, समस्या नै थाहा नपाई सरकारले गुठीमा हात हालेको देखिन्छ।
सदनले नमानेको र दुई तिहाइले जबरजस्ती गर्‍यो भने पास होला तर कार्यान्वयन हुँदैन। कार्यान्वयन नभएपछि सरकार असफल हुन्छ र खत्तम हुन्छ। यो भूमाफियाहरुको जग्गा खाने षड्यन्त्र हो। ललिता निवासको जग्गा जस्तै तहतह बेचेर नष्ट बनाउने षड्यन्त्र हो।
सरकारले आफ्नो देश र माटोलाई प्राथमिकता दिँदै आफैं खेत खन्ने र अन्न उब्जाउने कानुन ल्याउनुपर्छ।
अंग्रेजीमा एउटा उखान छ, 'जुत्ता लगाउने व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुन्छ आफूलाई कहाँ पोल्यो। अरूलाई थाहा हुन्न।' त्यस्तै गुठीका के समस्या छन् र ती समस्या निराकरण कसरी गर्ने हो भन्ने छलफल गर्न जरुरी छ। गुठी चलाउने व्यक्ति वा जानकारसँग छलफल गरी अगाडि बढेको भए सबैले सरकारको तारिफ गर्थे।
सरकारलाई नेवारको गुठी के हो भन्ने थाहा छैन। नेपाल भाषाका धेरै थरीका गुठी छन्। नाम पनि अनेकौं छन्। गुठी नेवारको धर्मभिरु (धर्म विश्वास) हो। खान र लगाउन पाएर मात्र नेवार समुदायको जीवन सम्पन्न हुँदैन।
धर्ममा विश्वास गर्ने मानिसले गुठी चलाउन र गुठीको पूजा गर्न सकेन भने पाप लाग्छ भन्ने धार्मिक मान्यता छ। यो सबै धर्मको आस्था हो।
सरकार सबैको चाहना बुझेर अगाडि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो। कोही व्यक्तिले गुठीलाई जग्गा दिएको होला तर अहिले त्यो जग्गा अरूले नै बचेर खाए। यी सबै व्यवस्थाको विचारै नगरी सरकारले बेमौसमी आदेश ल्याउन खाजेको छ।
पहिले हाम्रो पालामा गुठीले श्रमदान गर्थे। कुनै पनि काम गरेबापत गुठीलाई पैसा तिर्न पर्दैन। जुद्धशमशेरका छोराहरूले बाटो निर्माण गर्दा हामी गुठी बोलाएर श्रमदान गर्न गएका थियौँ।
परम्परादेखि यति राम्रो व्यवस्था भएको गुठीमा सरकारले अनेकौं युक्ति लगाउन खोज्दा नेवा सम्प्रदायको चित्त नबुझेको हो।
इसाईहरु गुठी मान्दैनन् र टीका पनि लगाउँदैनन्। उनीहरुको धर्म राम्रो छैन। हाम्रो पालामा एउटा पनि चर्च थिएन। अहिले पाटनमा मात्र २० भन्दा बढी चर्च बनिसके। क्रिस्चियन धर्म छल हो। यो सरकारको षड्यन्त्र पनि हुन सक्छ।
गुठी विधेयकमा सरकार असफल हुन्छ। सफल भए भने पनि जनसहभागिता हुँदैन। सरकार एक्लै सफल होला, विधेयक पास होला तर कार्यान्वयन हुन सक्दैन। नेवार समुदायले यसको चर्को विरोध गर्दैछन्। सरकारसँग लडेर नसकिने हैन। राजतन्त्रबाट गणतन्त्र आउन के सजिलो थियो र? राजाको फौज, पल्टन, मन्त्रीमण्डल सारा पछाडि छाडेर गणतन्त्र आउन सफल भयो। २००७ सालमा राणाहरुको त्यति ठूलो पावर थियो तर क्रान्ति ल्याएर सकियो।
त्यसैले जति बलियो भए पनि परिस्थितिसँग कोही बच्न सक्दैन। योसँग हामी डराउनैपर्छ। सरकार र हामी नेपालभाषी जति कराए चिच्याए पनि केही हुँदैन। जे गर्छ परिस्थितिले गर्छ।
पशुपतिनाथमा नेपाली भट्ट राख्ने भनेको जस्तै हो यो विरोध पनि। केही दिन चल्छ तर गुठी जसरी पनि रहन्छ।
बाबुरामले पनि एक राँगो र बोका दिए हुनेमा दरबन्दी के–के कति गर्ने भन्दै रातिको १ बजे छलफल गरेर, माफी मागेर पुनः इन्द्रजात्रा चल्यो। त्यसैले सरकार जति बलियो भए पनि जनतासामु झुकेकै राम्रो हो।
(वरिष्ठ संस्कृतिविद् वाङ्मय शताब्दी पुरुष जोशीसँग नेपाल समयका लागि सनम महर्जनले गरेको सम्वादमा आधारित)